Saint Augustine Biography - Evekan'i Hippo
Ny biography of St. Augustine
Evekan'i Hippo any Afrika avaratra (354-430 taorian'i JK)
I St. Augustine, evekan'i Hippo any avaratr'i Afrika (354-430 taorian'i JK), dia iray amin'ireo saina goavana teo amin'ny fiangonana Kristiana tany am-boalohany, teolojia iray izay nisy heriny teo amin'ny Katolika sy Protestanta rehetra .
Kanefa i Augustine dia tsy tonga tamin'ny finoana kristiana tamin'ny lalana tsotra. Tany am-piandohana dia nanomboka nitady ny fahamarinana izy tao anatin'ireo filozofia sy kolotsaina malaza tamin'ny androny. Ny fiainany mbola tanora ihany koa dia niharatsy noho ny fahalotoam-pitondran-tena.
Ny tantaran'ny fibebahany , izay voalaza ao amin'ny bokiny Confessions , dia iray amin'ireo fijoroana vavolombelona kristiana lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Ny Crooked Path Augustin
Teraka tamin'ny 354 tany Thagaste i Augustine, any amin'ny faritany avaratr'i Afrika, Numidia, Alzeria ankehitriny. Patricius rainy dia mpanompo sampy izay niasa sy voavonjy mba hahafahan'ny zanany hahazo fanabeazana tsara. Monica, reniny, dia Kristianina nafana fo izay nivavaka tsy tapaka ho an'ny zanany.
Avy amin'ny fampianarana fototra iray tao an-tanànany, i Augustine dia nandroso tamin'ny fianarana boky ara-literatiora, avy eo dia nankany Carthage mba hampiofanana ny lahateny, nalain'ny mpanohana iray atao hoe Romanianus. Ny orinasa ratsy dia nitarika ho amin'ny fihetsika ratsy. Augustin dia naka ankizivavy ary niteraka zazalahy iray, Adeodatus, izay maty tamin'ny 390 taorian'i JK
Noho ny hanoanana noho ny fahendreny dia lasa Manichean i Augustin. Manicheisma, natsangan'ny filozofa persianina Mani (216-274 AD), dia nampianatra ny dualisma, fizarazarana henjana eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Tahaka ny gnostisma , io fivavahana io dia milaza fa ny fahalalana miafina no lalana mankany amin'ny famonjena .
Nanandrana nampifandray ny fampianaran'i Bouddha , Zoroaster, ary Jesoa Kristy izy .
Nandritra izany fotoana izany dia nivavaka i Monica noho ny fiovan'ny zanany. Izany dia nitranga tamin'ny farany tamin'ny 387, fony nataon'i Ambrose i Augustin, evekan'i Milan, Italia. Niverina ho teraka tany Thagaste i Augustin, natokana ho mpisorona, ary taona vitsivitsy taty aoriana dia natao evekan'ny tanànan'i Hippo.
Augustin dia nanana fahaizana mamirapiratra nefa nitazona fiainana tsotra, tahaka ny moanina . Namporisihany ny monastera sy ny takelaka tao amin'ny episkôpà any Afrika izy ary nankasitraka ireo mpitsidika izay afaka nifampiresaka. Izy dia niasa bebe kokoa ho toy ny paroasy ho an'ny eveka, fa nandritra ny androm-piainany dia nanoratra foana izy.
Voasoratra ao amin'ny fonay
Nampianatra i Augustin fa tao amin'ny Testamenta Taloha (Fanekem-pihavanana Taloha), ny lalàna dia teo ivelany , nosoratana tamin'ny vato fisaka, ny Didy Folo . Io lalàna io dia tsy afaka hitondra fanamarinana , fa fandikan-dalàna ihany.
Ao amin'ny Testamenta Vaovao, na ny Fanekem-pihavanana Vaovao, ny lalàna dia voasoratra ao anatintsika, ao am-pontsika, hoy izy, ary isika dia natao ho marina amin'ny alàlan'ny famelana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavam-pitiavana .
Izany fahamarinam-panahy izany dia tsy avy amin'ny asantsika manokana, fa noho ny fahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana , no nahazo antsika noho ny hatsaram-panahin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny finoana sy ny batisa.
Ny finoan'i Augustin dia nino fa ny fahasoavan'i Kristy dia tsy nekena ho an'ny kaontintsika amin'ny fandaminana ny fahotantsika- fa ny fanamafisana antsika ny lalàna. Fantatsika fa amin'ny tenantsika manokana, tsy afaka mitandrina ny lalàna isika, ka dia tarihina amin'i Kristy isika. Amin'ny fahasoavana dia tsy mitandrina ny lalàna isika amin'ny tahotra, toy ny ao amin'ny Fanekem-pihavanana Taloha, fa noho ny fitiavana, hoy izy.
Nandritra ny androm-piainany, i Augustine dia nanoratra momba ny toetran'ny fahotana, ny Trinite , ny safidy malalaka ary ny toetra maha-mpanota ny olombelona, ​​ny sakramenta , ary ny fitahian'Andriamanitra . Tena lalina ny fisainany ka nanome hevitra ny fototry ny teolojian'ny kristianina nandritra ny taonjato maro.
Ny fiantraikany goavam-be tany Augustine
Ny asa soratra roa lehibe indrindra nataon'i Augustine dia ny fifankatiavana , ary ny tanànan'Andriamanitra . Ao amin'ny Confesia , izy dia mitantara ny fijangajangana ara-pitondran-tenany sy ny fiahian'ny reniny ny fanahiany. Mamintina ny fitiavany an'i Kristy izy manao hoe, "Ka dia hitsahatra tsy ho menatra aho ary hahita fifaliana ao aminao."
Tanànan'Andriamanitra , nosoratana teo akaikin'ny fiafaran'ny fiainan'i Augustine, dia ny fiarovana ny Kristianisma tao amin'ny Fanjakana Romanina . Ny Theodosius emperora dia nahatonga ny Kristianisma trinitera ho ara-dalàna ny fanjakan'ny empira tamin'ny 390.
Dimy amby roapolo taona taty aoriana, nandroaka an'i Roma ny Visigoths barbares, tarihin'i Alaric I. Romana maro no nanamarina ny Kristianisma, ka nilaza fa niala tamin'ny andriamanitry ny Romanina fahiny ny fahareseny. Ny sisa amin'ny Tanànan'Andriamanitra dia manohitra ireo tanàna ety an-tany sy any an-danitra.
Rehefa evekan'i Hippo izy, dia nanangana monasitera ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy i Md Augustin. Nanoratra fitsipika iray ihany koa izy, na fehezanteny iray, ho an'ny fihetsik'ireo moanina sy ny mona. Tsy tamin'ny 1244 no nananganana antokom-pinoana sy antokom-pihetsiketsehana nifamotoana tany Italia ary nanangana ny Fanjakan'i Md Augustin, tamin'ny fampiasana io fitsipika io.
Roa amby roapolo taona tatỳ aoriana, dia nanohitra ny ankamaroan'ny politika sy fotopampianarana tao amin'ny Eglizy Katolika i Augustin, mpiaro ny Baiboly toa an'i Augustine. Martin Luther no anarany, ary lasa olo-manan-kaja tao amin'ny Reformation Protestanta izy .
(Loharanon-kevitra: www.carm.org, www.britannica.com, www.augustinians.net, www.fordham.edu, www.christianitytoday.com, www.newadvent.org, fifandraisana , St. Augustine, Oxford University Press, fandikan-teny ary fanamarihan'i Henry Chadwick.)
Inona no atao hoe fahamasinan'Andriamanitra?
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny maha-mpanara-dia?
Inona no asehon'ireo fiangonana 7 an'ny Apokalypsy?
Avy amin'ny Vavolombelon'i Jehovah ho an'ny tsy mino: Ny fomba sy ny antony tsy fandroahana
Cathars & Albigenses: Inona no atao hoe katararisma?
Fampidiran-dresaka amin'ny manichisma
Mpamosavy, vehivavy ary mpilalao ody
Famaritana an-kolaka momba ny mpampianatra Job Description
Ahoana ny fametrahana tsipika miloko volotara fisaka
Missouri Adiresin'ny State Southern Missouri
Ny biography of Lewis Carroll
Inona no fomba tsara indrindra hianarana frantsay?
Fampiasana ny fotoana fametrahana ny asa ho an'ny famaritana ny binomial
Astronomie 101: Star Eyed? Andramo Stargazing
Fisorohana sy fitantanana ny aretina fihinanan-kena
Famaritana sy fampiasana galvanisation
Asa Fanampiana taorian'ny Sekoly Fanabeazana
Mampiasaina ho an'ny Bleach sy Vinegar
Fomba tsy hajanona amin'ny hiranao
Inona no ilay fikomiana ady totohondry?
Ny teny tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny teny Espaniôla
Inona no Manao Akanjo Skateboard Tsara?
"Raha azoko atao ny manakana ny fo iray tsy ho tapaka": Fahatakarana an'i Emily Dickinson